Dr Jules Etienne Rolland : Kandida ny fampiraisam-pirenena, hiasa ho an’ny tanindrazana
On avr 7, 2018 405
Anisan’ny kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena, atao amin’ity taona ity ny dokotera JULES ETIENNE Rolland. Efa ofisialy, izy no atolotry ny antoko politika Madagasikara Fivoarana na ny MAFI. Vonona tanteraka hiatrika ny adidy mavesatra hiandry azy eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izy. Mipetrapetraka avokoa, ankehitriny, ny tetikasam-piarahamonina ho entiny miasa, izay mahakasika ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Hovaindohan-draharahany ny fijerena ifotony ny olana sedrain’ny vahoaka Malagasy manerana ny nosy. Ho laharam-pahamehana avokoa ny zava-drehetra mba hisian’ny fampandrosoana mirindra sy mipaika mivantana amin’ny isam-paritra. Izay rahateo no anisan’ny teny filamatry ny kandida manokana.
– Mitarika politikam-pampandrosoana mahoby
– Mamoaka an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy ao anatin’ny fahantrana lalina
– Mametraka mpitondra mitsinjo ny tombon-tsoa iombonana lavitry ny kolikoly
– Famerenana amin’ny laoniny fanjakana tan-dalàna saro-piaro amin’ny filaminana sy ny teny nomena loharanon’ny fitoniana, antoky ny fitokiana sy ny Fandraisana Andraikitry ny mponina
– Famerenana amin’ny laoniny fahefam-panjakana, ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izay
– Mametraka ny lamina mikasika ny toekarena sy ny sosialy izay andraisan’ny tsirairay anjara mivantana izany dia hahasahana ny fiainam-bahoaka mivantana hatrany.
– Fampandrosoana mirindra isam-paritra.
– Hanome vahana ny seha-pihariana isan-karazany ahafahana manome loharanom-bola sahaza ny vahoaka Malagasy, sy ny orinasa mifandraika amin’izany.
IZA MOA IZY?
Mikasika ny fiainany manokana, teraka ny 19 aogositra 1958 , tany Manakara, faritra Vatovavy Fito Vinany zanak’Atoa JULES Etienne sy Narisoa Rosette. Manambady an-dRamatoa Rufin Sylvie Soatiana Zafisambo, izay zanaka vavina minisitra tamin’ny andron’ny amiraly Didier Ratsiraka. Manan-janaka telo mirahalahy. Avy amin’ny fianakaviana mpanao politika sy nanana andraikitra lehibe teto amin’ny firenena izy. Sady rahalahin’ny praiminisitra taloha, Ravony Franscisque no zanak’i Ravony Jules izay filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona voalohany teto Madagasikara. Olon’ny finoana sy be fandeferana ary mandala hatrany ny fihavanana. Izay rahateo no mampiavaka azy amin’ny kandida hafa, milatsaka ho filoham-pirenena ankehitriny. Vonona ny hifanome tanàna amin’ny mpanao politika rehetra izy. Mivoy ny fampihavanana ny samy Malagasy indrindra ny ankolafin-kery rehetra misy. Manana ny maha izy azy sy ny traikefa manokana izy. Azo antoka, fa ny fahalaniany eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha dia hanome rivo-baovao amin’ny fanaovana politika eto Madagasikara. Hanome fanatenana vaovao ho an’ny vahoaka, izay sasa-miandry olom-baovao, vonona ny hiady ho azy ireo. Ny dokotera JULES ETIENNE Rolland io.
FEHIN-KEVITRY NY KAONGRESY
Tsy ataon’ny antoko Madagasikara Fivoara ambanin-javatra ny fijerena ifotony ny fiainan’ny Malagasy, ary iarahany miombon-kevitra amin’ny filoha mpanorina izany. Nandritra ny fihaonana narahina ady hevitra, notontosaina afakomaly, nivoitra tao fa mangataka ny fandriampahalemana ny vahoaka Malagasy, mitaky vahaolana ihany koa amin’ny famatsiana herinaratra.
Ireo fehikevi-dehibe tapaka:
– Momba ny tsy fandriampahalemana:
– Tsy azo ekena ny tsy fandriampahalemana izay efa mihatra aman’aina ka noho izany mangataka ny hametrahana lalana mafy ny mpizaika hamerana azy amin’ny laoniny.
– Mitaky famoronana asa, hisorohana ny tsy fandriampahalemana
– Mila fifampitokisana ny samy vahoaka, ny vahoaka sy ny mpitondra, ny manampahefana samy manampahefana.
– Ankoatra ireo, takiana ny hanomezan-danja ny fanabeazana sy ny fibeazana ny olom-pirenena.
Mikasika ny herinaratra:
Tsy mahomby ny fitantanana ka tokony hisy ny fampidirana orinasa afaka mifaninana amin’ny famatsiana herinaratra.
Tsy ampy ny fahaizana mitrandraka ny akora azo ampiasaina, tokony homen-danja araka izany ny angovo maintso sy azo havadika.
Par: Riana Raymond
Photo: Jayah R
ASPAM : Mivondrona ireo mpilalao sy mpitia fiara madinika
Andry Rajoelina : Mivoy ny fifankatiavana sy ny fifanohanan’ny kirstianina